www.megaupload.com မှ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
www.megaupload.com မှ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ
15-03-2007, 02:44 PM
ခုကျနော်ရှင်းပြမှာကတော. ကျနော်တို. ဖိုရမ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေများပါ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လို.ရအောင် သုံးထားတဲ. Uploading Site တခုဖြစ်တဲ. www.megaupload.com ကနေဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်တွေချမလဲဆိုတာရှင်းပြပါ.မယ်။ ဒီဆိုဒ်က နေ ဖိုင်တွေကို download ချ ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Megaupload Toolbar ကို download ချပြီး မိမိတို. ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ
Install လုပ်ထားဖို.လိုပါမယ် ။ Toolbar ကို ဒေါင်းလုဒ် ချဖို.က တော. ကျနော် Link စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒီ Link ကနေ download လုပ်ကြပါ။
dowload ချပြီးတာနဲ. install ထားလိုက်ပါ။ Megaupload Toolbar က Internet Explorer မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကိုသတိပြုပါ။ installation ပြီးတာနဲ. IE ကို ဖွင်.ပါ။ Menu bar မှာ
View ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Click လိုက်လို.ရှိရင် ပေါ်လာတဲ. List မှာ Toolbars ဆိုတာရှိမယ်။
သူကမှ ထပ်ဆင်.သွားတဲ. List မှာ Megaupload Toolbar ဆိုတာရှိမယ်။အဲဒါလေးကို အမှန်ခြစ်လေးပေးလိုက်ပါ။ ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာပုံမှာကြည်.လိုက်ပါ။မိတ်ဆွေတို. ..ပုံကိုမမြင်ရဘူးမလုပ်ပါနဲ.။ပုံပေါ်ကို Click လေးလုပ်လိုက်ပါ။ နောက် Window တစ်ခုပေါ်လာပြီး ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာပါလိမ်.မယ်။
ကဲ..ခု ကျနော်တို. ဒီဖိုရမ်မှာတင်ပေးထားတဲ. Software တွေကို Megaupload site ကနေဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ် ချမလဲ ကြည်.ရအောင်။ ဥပမာ ကျနော်တို. IDM 5.05 ကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါတော. ။ပေးထားတဲ. Link က ဒီလိုဖြစ်မယ်လေ။ " http://www.megaupload.com/?d=JLA38LWQ " ပေါ.။ ဒီ လင်.ခ် ကို copy ယူပါ။
IE ကို open လိုက်ပါ။ ခု န ကူးယူလာတဲ. လင်.ခ် ကို IE က Address Bar မှာ Paste ချပါ။
ပြီးရင် Go ပေါ.။ အဲဒီ.အခါမှာ Next Page မှာ ခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာပါတဲ. PQP ဆိုတဲ.စာလုံး ၃ လုံးကို သူ.ညာဘက်က ကွက်လပ်လေးမှာ ရိုက်ထည်.ပါ။ ပေးထားတဲ. စာလုံးက အကြီးစာလုံးဆိုအကြီး ၊ ဂဏန်းဆိုရင် ဂဏန်း ၊ စာလုံးနဲ. ဂဏန်း တွဲထားတာဆိုရင်လဲ သူပေးထားတဲ.အတိုင်းသာ အတိအကျ ညာဘက်ကွက်လပ်မှာ ဖြည်.ပြီး Dowload ဆိုတဲ. Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုစမြင်ရပါမယ်။
စောင်.ရမှာပြီးလို. " Click Here to download "
ဆိုတဲ. စာတမ်းပေါ်လာရင် အဲဒီ. စာသားပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး " Save Target As "
ဆိုတာကိုရွှေးပါ။ တကယ်လို. မိတ်ဆွေဟာ IDM user ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော. အောက် က ၀ိုင်းပြထားတဲ. " Download with IDM " ဆိုတာကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကိုကြည်.လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ဒီဖိုရမ်သာမက ကြိုက်တဲ.တခြားဖိုရမ် ၊ ဆိုဒ်တွေက ပေးထားတဲ. megaupload link အားလုံးကို မိတ်ဆွေ ဒေါင်းလုဒ် ချ နိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက်။ Megaupload site မှ download ချရန် Megaupload Toolbar ကိုမဖြစ်မနေ
install လုပ်ရပါမယ်။ ဒီ Toolbar မရှိဘူးဆိုရင်လုံးဝ Free Download မရပါဘူး။
ပြီးတော. ဒီ Toolbar ကနေရာယူ တာ 1Mb တောင်မပြည်.ပါဘူး။စိတ်ချလက်ချ
သုံးလို.ရပါတယ်။ဒီ Toolbar ရှိထားရင် www.megaupload.com သာမက ၊
www.megrotic.com ကပါ download ချနိုင်တာဖြစ်လို.မဖြစ်မနေသုံးကြဖို.
Last edited by Admin; 20-03-2007 at 11:14 AM..
ကိုမိန်နွယ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖယောင်း, ယွန်းယွန်း, အိမ့်ဖြူ, ဦးလေးကြီး, မောင်သံသရာ, aungmyatwin, aungzaw, lazyguylay, minthike, mjkomg012@gmail.com, nanda, pannuko, zo
ပို့စ် 41 ခုအတွက် 108 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - www.megaupload.com မှ ဘယ်လိုဒေါင်းလုဒ်ချမလဲ
ကိုရဲနောင် ပေးထားတဲ့ http://www.megaupload.com/toolbar/me...olbarsetup.exe --- link က 404 Not Found ဖြစ်နေတယ်။ပြန်တင်ပေးလို့ရမလား။နောက်ပြီးတော့ mediafire ကဒေါင်းနည်းလေးပါပို့အသစ်ထပ်တင်ပေးနိုင်ရင်တင်ပေးပါလား။ကျေးဇူးတင်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ hta အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
hta ခင်ဗျာ .... ကိုရဲနောင်က လုပ်နည်းတင်ပေးထားတာပါ .....။
လင့်ကကြာတော့ အလုပ်မလုပ်တော့တာပါ ... အခု လင့်အသစ်ပေးလိုက်တယ် ...။
ဒါလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ပေါ့ ... ။ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ ... ။
Mediafire မှ ဒေါင်းလုဒ်ချရအောင်
ဒီလင့်လေးနဲ့ စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ .. ။
ဒေါင်းချင်တဲ့ လင့်ခ်လေးကို web browser တစ်ခုခုနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ ..
ပြီးတာနဲ့ Clcik here to start downoad ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...။
အဲဒါလေးကို ကလစ်လိုတာနဲ့ သိမ်းဆည်းမည့် နေရာတောင်းလာပါလိမ့်မယ် ...။
လိုချင်တဲ့ နေရာလေး ရွေးပေးပြီးတာနဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ချလိုက်ရုံပါပဲ ခင်ဗျာ ... ။
ကိုကမ်းသာယာ ရေ အစ်ကိုပေးတဲ့ဒေါင်းလုပ်လင့် က megaupload toolbar အတွက်လား။Hiren's.BootCD.9.4 ဆိုတာကြီးတွေ့နေလို့။နောက် အစ်ကိုပေးတဲ့ http://www.mediafire.com/?e3tytuoibbx လင့်ကိုဝင်လိုက်တော့ MPT က Access Denied တဲ့။proxy ကျော်ဝင်တော့လည်း အစ်ကိုပြတဲ့ ပုံမျိုး မတွေ့ရဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ hta အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-05-2008, 05:57 PM
အစ်မရေ ။ megaupload toolbar လိုချင်ရင် www.megaupload.com သွားလိုက်ပါ ။ အဲဒီမှာ ညာဘက်မှာ mega manager , mega toolbar , visitor exchange & business accounts ဆိုပြီး ခလုတ် ၄ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mega toolbar က ဒုတိယခလုတ် ထင်တာဘဲ ။ အဲဒါနှိပ်လိုက်ရင် download megaupload toolbar ဆိုပြီး ပေါ်လာလိမ့်မယ် ။ အဲဒီမှာ ယူရုံဘဲ ။
20-05-2008, 12:14 AM
[SIGPIC][/SIGPIC] [I][B][COLOR="Red"]သဘောပေါက်တယ်နော်[/COLOR][/B][/I] ........................ :12:
Last edited by ကောင်းကင်; 20-05-2008 at 12:16 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကောင်းကင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကောင်းကင်
25-06-2008, 01:33 AM
ကိုကမ်းသာယာပေးထားတဲ့ လင့်ကို www.ifile.it မှာ ပြောင်းတင်ပေးပါလား . . . ခင်ဗျာ ။
25-06-2008, 08:49 AM
ကမ်းသာယာ ပေးထားတဲ့လင့်ခ် ဆိုတာက mediafire နဲ့ megaupload ကနေ စမ်းပြီးဒေါင်းကြည့်ဖို့အတွက် နမူနာပေးထားတာပါ။
mediafire နဲ့ megaupload ရဲ့ ဘယ်လင့်ခ်မဆို စမ်းဒေါင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒါကို ifile ကနေပြောင်းတင်ပေးရင် ဘာထူးတော့မှာတုန်း။
ချယ်ရီမင်း, ယွန်းယွန်း, zo
26-06-2008, 09:49 PM
mediafire က download လုပ်လို့မရဘူး . . . error ဖြစ်နေတယ် အကို
http://www.mediafire.com/?e3tytuoibbx က ဒီလိုဖြစ်နေတယ် . . . Access Denied (policy_denied)
27-06-2008, 03:50 PM
ကောင်းမြတ်ရေ... မြန်မာမှာက mediafire ကိုဘန်းထားလို့ ၀င်လို့မရဘူး မဟုတ်လား။
အခု ဒီမှာရှင်းပြထားတာက ၀င်လို့ရပြီး ဒေါင်းနည်းမသိတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။
ဘန်းကျော်နည်းကိုတော့ မြန်မာကမောင်နှမတွေက ပိုပြီးကျွမ်းကျင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ချယ်ရီမင်း, ယွန်းယွန်း, မောင်သံသရာ, Aung Aung, minthike, zo
mediafire နဲ့ megaupload ကို Access Denied (policy_denied) အပြခံရသောသူများ အတွက် သတင်းကောင်းပါ. .... အဲဒါကို
ဘာနည်းနဲ့ ဝင်လို့ ရလဲဆိုတော့....ဇွတ်အတင်းနည်း နဲ့ ဝင်လို့ ရပါတယ်.... မရမချင်း Reload ပြန်လုပ်ပေးပါ.(Right Click မှာ Reload ဆိုတာ ပါပါတယ်...မသ်သောသူများ အတွက်ပါနော်...)..ငှက် ဆီမှာတော့ ၂ခါ ၃ခါ ဆို အိုကေပါတယ်ဗျာ..
ငှက်လဲ မသူသူ တို့ ကို အားနာတာနဲ့ ဇွတ်နည်း ကို ရှာတွေ့ တာပါ mediafire က ifile ထက်တောင် ဒေါင်းရတာ ပိုမြန်ပါသေးတယ်... ဒီစာကို ကြည့်နေတဲ့ အထဲမှာ MPT ကများပါခဲ့ရင် လက်မတို့ ပါနဲ့ နော်. ..ဟီဟိ
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ဇင်ယော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, ယွန်းယွန်း, ခေါက်ရောင်းသား, မောင်သံသရာ, Aung Aung, htikewailinn, minthike, zo
Megaupload toolbar ကဘယ်လိုမှရှာလို့မရဘူး...ကိုရဲနောင်ပေးထားတဲ့ link http://www.megaupload.com/toolbar/me...olbarsetup.exe ကလဲ 404 not found ဖြစ်နေပါတယ်....ကိုကမ်းသာယာပေးတဲ့ link ကတော Hiren's.BootCD.9.4boot CD imageကြီးဖြစ်နေပါတယ်......megaupload.com မှာရှာတော့လည်း mega manager download ပဲတွေ့တယ်.....megaupload toolbar ဆိုတာကိုရှာလို့မရပါဘူး....အဆင်ပြေရင်ပြန်တင်ပေးပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
28-12-2010, 06:02 AM
ကျွန်တော် ခုကြည့်တာက megaupload toolbar က မရှိတော့တာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်လည်း Mega manager ပဲ တွေ့တော့တယ်။ toolbar တော့ မတွေ့တော့ဘူးခင်ဗျ။
ဟုတ်တယ်ကိုအောင်အောင်.....megaupload toolbar ကိုလိုချင်ရင်ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲအကို.......
28-12-2010, 08:18 AM
အမ်၊ အကိုကလည်း မရှိတော့တာကို ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မလိုအပ်ဘူး / အသုံးမဝင်တော့ဘူးထင်လို့ မတင်တော့တာလေ။ toolbar ကတော့ မထားတာ ကောင်းပါတယ်။ browser မှာ အစကတည်းက ရှုပ်နေတတ်တာ၊ toolbar တခုထပ်တိုးရင် နေရာလည်းပိုယူတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, azp09, ko lin, minthike, phoetharlay, zo
Megaupload မှ Software သုံးပြီးဒေါင်းမယ်။
ကျနော် Software လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ လက်ရှိကျနော်လည်း Mega မှ File တွေကိုသူ့ကိုသုံးပြီးဒေါင်း နေတာအဆင်ပြေတယ်။ အခုပြောမိတာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ။ သိတဲ့သူများရှိရင်လည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါ။
ဒါက သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုဒ်ပါ။ http://www.mipony.net/
Software နာမည်က Mipony ပါ။ သူ့ကို မူရင်းဆိုဒ်လေးမှာဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ Free ပါ။
ကျနော်လည်းနမူနာဒေါင်းပြထားပါတယ်။ သူက Megaupload ကိုတော်တော်နိုင်တယ်ဗျာ။ ကျနော်က အခု ဝိုင်ဖိုင်သုံးပြီးဒေါင်းထားတာကိုပြထားတယ်။ လင့်ကောင်းလို့ ဒေါင်းတယ် ဒါပေမယ့် Waiting min မှာကြာနေရင် လင့်ကို select လုပ်ပြီး Stop လုပ်ပါ. ပြီးရင်ပြန်ဒေါင်းပါ မရသေးရင် ပြန်လုပ်ပါ. အပေါ်က stop က လင့်တွေ အကုန်လုံးကိုရပ်လိုက်တာ။ မရရင် ဆော့ဝဲလ် ကိုပိတ်ပြန်ဖွင့်ပြီးဒေါင်းပါ ရပါလိမ့်မယ်. လင့်သာကောင်းပါစေ မရမရှိ ပါခင်ဗျာ။ အာမခံ၏။ Mediarife ဆိုရင် လင့် ၄ ခုကို တစ်ပြိုက်နက်ဒေါင်းတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါ။ အဆင်မပြေသည် များရှိပါက မေးပါ။အားမနာတမ်း ပြောပါ။ အခုတစ်လော ကျနော်တို့ အင်တာနက် လိုင်းဖြုတ်သွားလို့ သူများ လိုင်းကို ဝိုင်ယာလက်နဲ့ဆွဲသုံးရတော့ အားနာတာနဲ့ မဝင်ဖြစ်လို့ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုရီးယားကားများ Mega လင့်မှဒေါင်းရသော ဆိုဒ်များရှိရင် ကျနော်ကို မျှပေးပါအုံး။
ချယ်ရီမင်း, ယွန်းယွန်း, ဝင်းအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, bagothar85, g00gle, hellboy, htun30, kaung kin lu, KznT, minthike, PyaitSone, tu tu, zo
Control Panel ကိုပိတ်ထားနည်း shadeboy ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 24 03-01-2009 12:09 AM
imeem.com မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်သူများအတွက် ကောင်စုတ်လေး Applications710-11-2008 03:27 PM
Run Box မှ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် shortcut များခေါ်ယူခြင်း yeakharr ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 8 25-10-2008 03:11 AM